Axmed Madoobe oo Amar-siiyey Saraakiil ka tirsan Ciidanka Jubbaland – Radio Baidoa
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo shalay Gelinkii dambe gaarey degmada Afmadow ee Gobolka Jubbada Hoose,ayaa halkaas waxaa uu ka bilaabey kulamo kala duwan.
Axmed Madoobe ayaa waxaa uu la kulmey Saraakiisha Ciidanka Jubbaland ee degmada Afmadow oo uu kamid yahay taliyaha Ciidamada Jubbaland ee degmadaas oo lagu Magacaabo Mahad Islaam.
Saraakiisha Ciidamada Jubbaland ee Afmadow iyo Axmed Madoobe ayaa waxaa ay ka wada hadleen sidii loo bilaabi lahaa howlgallo ka dhan ah Ururka Al-Shabaab oo laga fuliyo deegaannada hoostaga degmadaas iyo sugida amniga guud ahaan Gobolka Jubbada Hoose.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Saraakiisha Ciidamada Jubbaland uu Axmed Madoobe farey in ay muujiyaan diyaar garoowgii ugu dambeeyey oo ay ku bilaabi lahaayeen howlgallada oo dhowr jeer dib uga dhacay.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Magaalada Dhoobleey ayaa halkaasi kula kulmey Saraakiisha Ciidanka Jubbaland,isaga oo kala hadlay sidii Ciidamadu u bilaabi lahaayeen dagaal ka dhan ah Al-Shabaab.